Fanesorana amin'ny lisitra mainty an'ny Comcast | Martech Zone
Zoma, Jolay 18, 2008 Zoma Janoary 11, 2013 Douglas Karr
Raha mandefa mailaka be dia be avy amin'ny fampiharana anao amin'ny alàlan'ny marketing amin'ny mailaka ianao, dia mila mahazo antoka fa voafintina fotsy amin'ny mpamatsy tolotra Internet lehibe ianao. Izaho dia efa nanoratra momba ny whitelisting miaraka AOL ary Yahoo! Androany dia hitantsika fa mety misy ny olana mety hanakanana ny tranonkalantsika Comcast. Comcast dia manana fampahalalana vitsivitsy hilazana raha manakana ny mailaka na tsia izy ireo.
Nanoratra tamin'ny lasa aho inona ny dingana Nianarako ny miantoka ny lazanay fa mitazona laza tsara ny tranokalanay, saingy mbola azo atao izany olan'ny fandefasana mailaka na dia tsy manan-tsiny aza ianao.
Nisy solontena iray avy any Comcast nandatsaka mailaka iray manana rohy mankany Fangatahana fangatahana mpamatsy voasakana Comcast. Nofenoiko avokoa izany rehetra izany, antenaina fa ity dia mamaha ireo olana nihaona tamina halina izay tsy nahafahan'ny mpampiasa nahazo fidirana akory tamin'ny fampiharana anay.
Namaky nofy ratsy vitsivitsy tamin'ny Internet aho momba ny fanakanana ny DNS an'i Comcast. Manoro hevitra ireo mpampiasa izahay mba hampiasa OpenDNS mandritra ny fotoana fohy.
Tags: blacklistcomcastmailakalisitra mainty